Kadib Guuldaradii Man United Ka Soo Gaadhay Sevilla, Romelu Lukaku Oo Si Layaableh Ciyaartoyda Kooxdiisa Ugu Weeraray Guuldaradii Sevilla Ee UCL. – GOOL24.NET
Kadib Guuldaradii Man United Ka Soo Gaadhay Sevilla, Romelu Lukaku Oo Si Layaableh Ciyaartoyda Kooxdiisa Ugu Weeraray Guuldaradii Sevilla Ee UCL.
March 14, 2018 Mahamoud Batalaale
Xidiga xulka qaranka Belgium iyo kooxda Manchester United ee Romelu Lukaku ayaa markii ay soo dhamaatay ciyaartii Old Trafford ee kooxdiisa looga reebay UEFA Champions League waxa uu bixiyay waraysi si xun ugu weeraray qaar ka mid ah ciyaartoyda kooxdiisa isla markaana uu ku soo bandhigay niyadjabkii ay ka qaadeen guuldaradii Sevilla.
Lukaku oo waraysigan siiyay BT Sport oo haysta xuquuqda baahinta UEFA Champions League ayaa muujiyay sida ayna kooxdiisu uga faa’iidaysan tayada ciyaartoyda ay haysato wuxuuna qiray in ayna u qalmin u soo bixitaanka wareega siddeed dhamaadka maadaama oo uu garwaaqsaday in Sevilla ay shaqadii ugu fiicnayd qabtay.
Ugu horayn Romalu Lukaku oo eedaynaya ciyaartoyda kooxdiisa Man United ayaa yidhi: “Qaar ka mid ah ciyaartoyda ayaa qalad lahaa, qaar ka mid ah ciyaartoyda ayaa isqarinayay. Khiyaanadu xaqiiqdii way waynayd, sababtoo ah si fiican ayaanu ciyaarta ku bilaabanay kadib waxaanu bilawnay in aanu ogolaano in ciyaarta ay iyagu maamulaan”.
Lukaku oo ka hadlaya fursado ay lumiyeen ayaa yidhi: “Kadib waxaanu helnay fursado kala badh ah laakiin xaqiiqdii goolal kumaanu dhalin kadib waxay dhaliyeen goolka kowaad. Laga soo bilaabo waqtigaas waxaanu isku daynay in aanu ciyaarta baacsano isla markaana waxay dhaliyeen goolka labaad kaas oo dhirbaaxo wayn ahaa. Dhamaadkii waxaanu sii wadnay riixista laakiin wax ku filan may noqon”.
Romelu Lukaku ayaan qarsan sida ay ciyaartoyda kooxdiisu ugu fashilmeen in ay tayadooda muujiyaa wuxuuna qiray in ayna u qalmin in ay soo baxaan wuxuuna yidhi: “Waxaa waajib nagu ahayd in aanu wax ka fiican samayno, sababtoo ah tayada aanu kooxda ku haysanao waxaa waajib ahayd in aanu soo baxno, anagu umaanu qalmin soo bixitaanka sababtoo ah in ku filan umaanu fiicnayn”.
Goolkii uu Romelu Lukaku dhaliyay daqiiqadii 84 aad ayaa sare u soo yara qaaday hamiga Old Trafford wuxuuna isaga oo ka hadlaya yidhi: “Waxaa waajib nagu ahayd in aanu dhalino xili ka horaysay, laga yaabee qaybtii hore ee aanu fursadaha kala badhka ah abuurnay, kubbad bixinta ugu danbaysaa maanta in ku filan u may fiicnayn”.
Hadda Man United ayaa haysata kaliya FA Cupka si ay koob ugu dagaalanto wuxuuna Lukaku xusay in ay ka soo kabsadaan guuldarada Sevilla wuxuuna yidhi: “Waxaanu ognahay in aanu tayo badan kooxda ku haysano laakiin maanta maanu muujin, sidaa daraadeed waa wax anaga nagu adag. Waxaa waajib nagu ah in aanu ka soo kabsano, waxaanu haysanaa hal koob oo aanu baacsano kaas oo ah FA Cupka”.
Ugu danbayn Lukaku ayaa ka hadlay waxay rajadoodu ahayd wuxuuna yidhi: “Laakiin waxaanu doonaynay in aanu aad ugu sii fogaano Champions League, sababtoo ah taasi waa waxa ay u baahan tahay koox Manchester United oo akle ahi, maanta maanu samayn, sidaa daraadeed aad ayaanu u niyadjabsanahay”.
Manchester United ayaa noqotay kooxdii abid ugu horaysay ee dalka England ah ee ay Sevilla guul kaga gaadho ciida England kulan tartanka Yurub ah waxayna kooxda Sevilla markii ugu horaysay taariikhdeeda ay u soo baxday siddeed dhamaadka UEFA Champions League oo ay muddo 60 sano sugaysay.